I-Adobe yazisa nge-2018 iinguqulelo ze-Photoshop Elements kunye ne-Premiere Elements | Ndisuka mac
Asinakuthi iinyanga zokugqibela zonyaka asinazo iinkcazo zeenkqubo ezintsha zokusebenza kunye neenkqubo. Kule meko, iAdobe ivelisile Uhlelo luka-2018 yesoftware yakho yokuqala xa kuziwa ekuhleleni iifoto kunye nokuhlelwa kwevidiyo. Sithetha ngabantu esibaqhelileyo I-Photoshop kunye neNkulumbuso, kodwa kuhlobo lwayo lweZinto. Le fani ayifanele ukuba yenze inkqubo ibe neempawu ezimbalwa, kuba uninzi lwabasebenzisi, umxholo wabo ungaphezulu ngokwaneleyo. Ukuqala namhlanje sinokukhuphela ingxelo yethu yesilingo okanye sihlaziye inguqulelo yakho yangoku yeeFotohop Elements kunye neNkulumbuso yeeNxalenye.
Njengoko sicinga, Izinto ezintsha zintsha kwizicelo ezibini. Ngokubhekisele kwi-Photoshop, sinokusebenziseka kokwahlulwa kwamathala eencwadi, okwenza kubelula ukujonga iifoto. Baphucula ukhetho lokwahlula iifoto ezinje: umhla, umntu, iindawo, njl. Sinohlelo oluzenzekelayo olusekwe kumgangatho wemifanekiso, umxholo (indalo, ezemidlalo, gastronomy, njl.
Izixhobo zokuhlela ezintsha zibandakanyiwe: sinokukhetha iinxalenye zemifanekiso ukusebenzisa izilungiso ezithile. Omnye umsebenzi omangalisayo kukwenzeka "kokuvula" amehlo abantu abaye bafa bengafakwanga amehlo abo evaliwe (kule nto, sifuna ifoto efanayo nesihloko ngamehlo avulekileyo).
Isicelo sinokusetyenziswa nangabasebenzisi ukuqala ekuqaleni. Abaphuhlisi bayayazi le nto kwaye badibanisa amanyathelo akhokelwayo. Phakathi kwazo sinako: buyisela ngokukhawuleza imvelaphi, yongeza "ubugcisa" okanye wenze isithuba esiphindwe kabini ngokufaka umfanekiso omnye komnye.
Iindaba zomhleli wevidiyo, I-Premiere Elements, jolisa ekuphuculeni ukuhlelwa kwevidiyo: zininzi iindlela zokwenza iodolo, kubandakanya nolawulo lwethegi, into efana neFCP X. Kwakhona siza kubona oosiyazi ukuba: bawunqande umfanekiso, bongeze izihloko zoopopayi, benze iziphumo zempazamo, iividiyo ezichanekileyo ezirekhodwe ngeekhamera zemidlalo okanye nokuba upapashe iividiyo ezimfutshane kuthungelwano lwentlalo. Ukuba ufuna ukwazi zonke iindaba, ezininzi, unokufikelela kule khonkco ilandelayo.
IiFotohop Elements kunye neNkulumbuso yeeNxalenye ziyafumaneka kweyakho ukukhutshwa kwiphepha le-Adobe. Ixabiso lenkqubo nganye yi- $ 100,43, kwaye kwimeko yokuhlaziya i- € 82,28.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-Adobe yazisa nge-2018 iinguqulelo ze-Photoshop Elements kunye ne-Premiere Elements
IFeral ibhengeza ukufika komdlalo weFomula 1 2017 ngomso kwiVenkile ye-Mac